भारतमा उत्पादित खोपलाई अमेरिकाले दिएन प्रयोग अनुमति - Aarthiknews
एजेन्सी। अमेरिकाको औषधी नियामक एजेन्सी युएस फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ले भारतमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोप कोवैक्सीनलाई प्रयोग अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकामा रहेको भारतीय कम्पनीको सहायक कम्पनी अक्युजनले जुन १० तारिकमा भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको खोप कोवैक्सीनलाई प्रयोग अनुमति माग्दै निवेदन हालेको थियो।
भारतको नीति आयोगका स्वास्थ्य सदस्य डा. वीके पलले भनेका छन् कि अमेरिकामा आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतीय कोरोना खोपले अनुमति नपाए पनि सो निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्दछ।
उनले भने कि हरेक देशको आफ्नै नियामक प्रणाली हुन्छ। जहाँ केही चीजहरू अरूसँग समान हुन्छन् जबकि केही चीजहरू फरक हुन्छन्। युएस फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) लाई अनुमति नदिने निर्णयको बारेमा डा. पालले भने, "वैज्ञानिक रूपरेखा उस्तै हो तर यसका सूक्ष्म भिन्नताहरू बारेका प्रसङ्गमा धेरै कुरा आश्रित छन्।"
उनले भने, “यी सबै वैज्ञानिक विचारहरू हुन् र उनीहरूलाई दिमागमा राख्दै केही सूक्ष्म भिन्नताहरू हुन सक्छन् विशेष गरी ती देशहरूमा जहाँ विज्ञान धेरै शक्तिशाली छ। हाम्रो उत्पादन बलियो छ। तिनीहरूले यो निर्णय लिएका छन्, हामी यसको सम्मान गर्दछौँ। "